Abathengisi beSMS | Abathengisi bokuthumela imiyalezo
Ungawukhetha njani umthengisi weSMS / uMyalezo obhaliweyo
NgoLwesithathu, Meyi 19, 2010 NgoMvulo, nge-16 kaJanuwari, 2017 UAdam Omncinci
Ukuthengisa ngeSelfowuni ngokukhawuleza kuya kuba yinto ebalulekileyo kuhlahlo-lwabiwo mali oluninzi. Uninzi lwentengiso eshukumayo iza yenye yeencasa ezintathu:
I-SMS / Imiyalezo ebhaliweyo
IiWebhu eziSelfowuni kunye nezicelo zeSelfowuni zihlala zinxibelelana kwaye zinamacandelo emizobo. Umda kuzo zombini ezi zinto kukuba zibiza kakhulu ukuphumeza kunye nokugcina. Ngenxa yoku iinkampani ezininzi ziqala iinzame zazo zokuthengisa ngeSMS, ebangele ukuba kuqhume inani labathengisi beSMS. Abanye baba bathengisi bakhulu abanye abekho kangako kwaye abanye ba…… Ke yintoni eyenza umthengisi weSMS olungileyo? Ndiwukhetha njani umthengisi weSMS / uMyalezo obhaliweyo?
Zintathu izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha uMthengisi weSMS:
Ngaba umthengisi uhambisa imiyalezo nge-shortcode okanye usebenzisa i-sms kwi-imeyile? Nawuphi na umthengisi wombhalo weSMS ofanele ukusebenza naye kufuneka asebenzise ikhowudi emfutshane. Ukusetyenziswa kwe-imeyile kwiisms zokungena kwintengiso ephathekayo kwaphula imiqathango yenkonzo kwaye akuqinisekanga ngokubanzi.
Ngaba umthengisi uneeNgcali zeNtengiso yeFowuni kubasebenzi Ezi ziingcali ezinolwazi kuphela kwiimfuno zobuchwephesha kwizikhokelo zoMbutho woThengiso lweSelfowuni kodwa zikwangcono ekuncedeni ukuhambisa umxholo ofanelekileyo phakathi. Ukuthengisa ngeselula lijelo elilodwa ngenxa yobume bayo obugqithisileyo kwaye umyalezo kufuneka wenziwe unale nto engqondweni.
Bathini abathengi babathengi malunga nenkonzo yabo yabathengi? - Abathengi abonwabileyo luphawu lomthengisi olungileyo, kubonakala ngathi kulungile?
Ukuthengisa ngeSelfowuni kukhula kumzi mveliso owomeleleyo kodwa kusencinci kwaye baninzi abadlali kumdlalo. Qiniseka ukuba uyawenza umsebenzi wasekhaya xa usenza isigqibo kwiqabane elihambayo.
tags: urhwebo mobilei-SMSukuthengisa ii-sms
Thetha nam ngeTokBox
Meyi 20, 2010 kwi-12: 39 PM
Amanqaku abalaseleyo, uAdam. Ukukhetha umthengisi weselula weSMS ngokuqinisekileyo kunokuba nzima. Jonga le post yebhlog ngamanye amanqaku abaluleke ngakumbi ekufuneka uwaqwalasele (kunye nemibuzo omawuyibuze) xa uthatha isigqibo malunga nomthengisi weselula weSMS: http://lunchpail.knotice.com/2010/04/28/tips-for-choosing-an-sms-mobile-vendor/